Momba anay - Fialam-boly Fahafinaritra mahafinaritra Fasana Co, Ltd.
Manao izay azonay atao izahay mba hahatonga ny fiainanao ho feno fahafinaretana
Fitaovana mahafinaritra fialamboly mahafinaritra Co, Ltd
Great Fun Amusement Equipment Co., Ltd. (GFUN) dia miorina ao amin'ny tanàna Nantong, Jiangsu Province, manana traikefa 10 taona amin'ny famokarana fitaovana fialamboly. Ny orinasa dia manamboatra manokana amin'ny famokarana fitaovana fialamboly tsy nahazoana alàlana, fitaovana fialam-boly ny rano, fitaovana fialamboly amin'ny valan-javaboary, fitaovana fialam-boly ho an'ny ankizy, fitaovana fialam-boly ho an'ny ankizy anatiny, fitaovana fialam-boly ho an'ny ankizy any ivelany, fitaovana fialamboly ivelan'ny trano ary fitaovana fialamboly efa mahazatra. Izahay dia orinasa mpiasan'ny fialam-boly feno feno, manome ny mpanjifa amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, famolavolana, famokarana, varotra, fametrahana, serivisy ary serivisy mahazatra.
Ny GFUN dia mifikitra hatrany amin'ny tsena ary maniry ny hanomezana ny filan'ny mpanjifany. Ny ohatra momba ny vokatra dia ahitana paradisa an-jaza, lapa manjavozavo, fitaovana fanitarana anatiny, fitaovana fitaovam-pandraharahana anaty tamba-jotra, fitaovana fanaovana fitambaran-tarehy ary fitaovana fampivoarana ara-batana ho an'ny zaridaina lohahevitra. Fitaovana paradisa, fitaovam-panatanjahantena ivelany, zaridaina rano, seza fialam-boly any ivelany, fako fako, lakana azo antoka, indrindra ho an'ny trano sy trano, akanin-jaza, mpiara-monina, zaridaina, hotely, trano fandraisam-bahiny, valan-javaboary ary toerana mahafinaritra isan-karazany. Ny orinasanay dia afaka mameno fitaovana isan-karazany amin'ny fialam-boly ary ny vokatra avy any aminay dia efa navarina tamina firenena sy faritra 20 mahery tany Eropa, Russia, Middle East, Azia Atsinanana ary Afrika. Matoky sy mendri-piderana tokoa ny mpanjifantsika, ary ny kalitao mifandraika amin'izany dia ny kalitao avo indrindra.
Ny fahamarinan-toetra, ny tanjaka ary ny kalitaon'ny GFUN dia neken'ny indostria ary ny namana avy amin'ny faritra rehetra dia miarahaba ny fifampiraharahana aminay.
☆. Manamboatra traikefa amin'ny orinasa fialamboly 10 taona.
☆. Am-polony ny tranga mahomby.
☆. Ny ekipa matihanina dia manolotra fanohanana ara-teknika amin'ireo mpanjifa.
☆. Azontsika atao ny manome ny fandaharana ho an'ny mpanjifanay maimaimpoana.
☆. Ny fitaovana rehetra momba ny vokatra azontsika dia miaro ny tontolo iainana ary ny fitaovanay rehetra dia nandalo ny fanamarinana CE.
☆. Mandeha manampy ireo mpanampy ara-teknika mba hanampy ireo mpanjifa amin'ny famoronana ny fametrahana manerana izao tontolo izao.
Fa maninona no mifidy GFUN?
Momba ny teknolojia
Momba ny fanomezam-boninahitra
Ny orinasa dia nanolo-tena tamin'ny fampidirana ireo milina famokarana efa mandroso indrindra sy haitao famokarana, ny akora mpamatsy kalitaona avo indrindra manerantany ihany no mamokatra vokatra, hany ka nihatsara ny kalitaon'ny fanatanjahantena.
Nandritra ny taona maro ny orinasanay dia nahazo matetika fanomezam-boninahitra nasionaly, faritany sy monisipaly tao amin'ny indostria, Ny fitazonana ny kianja filalaovana dia iray amin'ireo orinasa tsara indrindra amin'ny indostrian'ny orinasa miasa amina fenitra avo indrindra.
Manana traikefa 10 taona amin'ny famokarana fitaovana fialam-boly izahay, ny fitaovana rehetra momba ny vokatra dia ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fitaovantsika dia nandalo ny fanamarinana CE, ny fanamarinana rafitra ara-pahasalamana ISO9001 ary ny fanamarinana rafitra fiarovana iraisam-pirenena ISO14001 ary ny rafitra ara-pahasalamana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana OHSAS.
Ny habe sy endriny natao manokana dia azo alaina. Tongasoa eto hizara ny hevitrao aminay, ndao hiara-hiasa hahavita mamorona kokoa ny fiainana.
Ny marika tsara dia tohanan'ny kolontsaina orinasa. Fantatsika tsara fa amin'ny alàlan'ny fitaomam-panahy mitohy, ny fidirana sy ny fampidirana dia mampisy kolontsaina orinasa. Nandritra ny taona maro izay, ny fivoaran'ny orinasa dia notohanan'ny soatoaviny --- fahatokiana, fanavaozana, andraikitra, fiaraha-miasa.
Mifanaraka hatrany amin'ny foto-kevitry ny olona manao ny asa, ny fanaovana asa marina, ny kalitao voalohany ary ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa.
Ny tombony mifaninana eo amin'ny orinasanay dia toe-tsaina toy izany, manao ny dingana tsirairay isika miaraka amin'ny fihetsika hentitra.
Ny fanavaozana no fototry ny kolontsainan'ny ekipantsika.
Mitombo ny fampandrosoana, manome hery, Ny zava-drehetra dia avy amin'ny fanavaozana.
Ny mpiasa dia manavao ny hevitra, mekanika, teknolojia ary fitantanana.
Ny orinasanay dia mazoto miasa mandrakariva amin'ny fanovana ny paikady sy ny tontolo iainana ary miomana amin'ny fotoana hiseho.
Ny andraikitra dia manome faharetana.
Ny ekipanay dia manana fahatsapana andraikitra lehibe sy iraka amin'ny mpanjifa sy ny fiarahamonina.
Ny herin'io andraikitra io dia tsy hita maso, fa afaka mahatsapa.
Herin'ny fampivoarana ny orinasan-tsika.
Ny fiaraha-miasa no loharanom-pandrosoana, ary ny fananganana toe-javatra fandresena dia heverina ho tanjona manan-danja amin'ny fampandrosoana ny orinasa. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa mahomby amin'ny finoana tsara, isika dia mikatsaka ny hampiditra ireo loharano sy mifameno mba hahafahan'ireo matihanina manao kilalao feno ho azy ireo.
Raha liana amin'ny vokatra avy aminay ianao, azafady miangavy anao hifandray aminay mba hanontany.